Nbudata Sukhoi SuperJet SSJ-100 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 15 792
AEROPROYECTO (Edgar Guinart López), Native FSX/P3D ntụgharị site Rikoooo
Emelitere na 26 / 09 / 2019: FSX / FSX-SE Erigharịtara ahụhụ nke kokpiiti mebere nke adịghị ahụ anya dabere na ọnọdụ elele.
Nke a bụ naanị Rikoooo ndị Sukhoi SuperJet 100 nwa afọ FSX na Prepar3D v4. Ọ bụ site n'ikike nke Edgar Guinart López (AEROPROYECTO) Rikoooo agbanweela ihe nlereanya a nke bụbu maka FS2004.
Ihe ndị dị mkpa: Ejikọtara ngwugwu a na kokpiiti mebere nke bụ nke A321 nke ndabara FSX ma Rikoooo gbanwere (enweghị VC nke SSJ-100 na-enweghị ihe ọ bụla ugbu a), etu ọ dị, panel 2D bụ nke SSJ-100 nke Edgar Guinart López mebere, ọ dịịrị gị ịhọrọ, ma ị ga-efe na VC mode ma ọ bụ Advanced 2D Panel panel nke SSJ-100, ma ọ bụ ha abụọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ụgbọ elu ahụ enweghị ike ịchịkwa.
Ejikọtara ya na ụda sitere na SSJ-100, Call Out Sounds, V1 Vr V2 ụda olu, RCB Groundhandling, FMC, 2D Panel dị na mpịakọta abụọ ma ọ bụ ihuenyo 16 / 9 ma ọ bụ ihuenyo 4 / 3. Ihe ndozi ato: Aeroflot, Interjet, White.
Mara na na 2D Panel ụdị ahụ add-on bido COL & DARK mode, gụọ akwụkwọ ntuziaka maka ezigbo njigide nke sistemụ. Iji malite batrị ị ga-ewepu nchekwa nchekwa na bọtịnụ aka nri, nke a dị ezigbo mkpa! Ma ọ bụghị ya, ị nwere ike igbochi ebe a, lee foto n'okpuru:
Offọdụ n’ime unu ga-ahapụ okwu iji kwuo na injin ahụ amaliteghị na ọnọdụ 2D Panel, mana ee e, ha na-ebido nke ọma ma ọ bụrụ n’ịgbaso ma ọ dịkarịa ala usoro ntuziaka ma maka FSX or Prepar3D v4 +.
Sukhoi SuperJet 100 (ndebiri: SSJ100, nke aha ya bụ Russian Regional Jet ma ọ bụ RRJ, mara na Russian: Сухой Суперджет 100) bụ ezinụlọ nke ndị ụgbọelu mpaghara nke ụlọ ọrụ Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC). Flightgbọ elu nke mbu mere na May 19, 2008.
SuperJet 100 kwesịrị ịdị n'ọtụtụ nsụgharị dabere na ogologo fuselage maka ikike ịnya ụgbọ ala sitere na ndị njem 75 ruo 95.
Na 2014, etinyere ụdị azụmahịa nke Sukhoi SuperJet 100 na ọrụ (Wikipedia)
Onye edemede: AEROPROYECTO (Edgar Guinart López), Native FSX/P3D ntụgharị site Rikoooo